तीन तलाबाट खसेर बाँचेकी अभिनेतृ – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
तीन तलाबाट खसेर बाँचेकी अभिनेतृ
सबैभन्दा नजिकका ‘बेस्ट फ्रेन्ड’ भनेकै जीवन भट्टराई
केदारनाथ गौतम/शङ्कर क्षेत्री काठमाडाैं, ०१ चैत, २०७६
अभिनय क्षेत्रमा जमेकी कलाकार हुन् लक्ष्मी बर्देवा । सात वर्र्षअघि पहिलो नाटक ‘उम्बुगल्याण्डको मुठभेड’ बाट अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेतृ लक्ष्मीले दर्जनभन्दा बढी नाटकमा अभिनय गरेकी छन् । ‘माला’, ‘घामपानी’, ‘जालो’, ‘बुलबुल’, ‘सेल्फी किङ’ लगायतका चलचित्रमा उनी अभिनेतृको भूमिकामा देखा परेकी छन् । ‘बुलबुल’ फिल्मले नै लक्ष्मीलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइदियो ।
वि.सं. २०४९ मा जन्मिएकी अभिनेतृ लक्ष्मीको जन्मथलो ललितपुर हो । एक वर्षअघि माघ, २०७५ मा मात्र उनी मकवानपुर (हेटौंडा) का जीवन भट्टराईसँग वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएकी छन् । प्रेमविवाह गरेका लक्ष्मी र जीवनबीचको दाम्पत्य जीवन प्रेमपूर्ण छ । जीवन पनि कलाकार (अभिनेता) नै हुन् । उनले पनि दर्जनभन्दा बढी नाटक र करिव त्यति नै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
२७ वर्षीया अभिनेतृ लक्ष्मीको तौल ५५ किलो र उचाई ५ फिट २ इन्च छ । टमक्क मिलेको फुर्तिलो शरीरकी लक्ष्मीको अनुहारको चमक पनि कम देखिँदैन । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति उनी निकै सचेत छिन् ।
बिहानै डेढ लिटर पानी
लक्ष्मी सामान्यतः बिहान आठ बजे उठ्छिन् । बिहान उठ्ने समय भने राति सुत्ने समयले निर्धारण गर्छ; ढिलो सुतेकी छन् भने बिहान ढिलै उठ्छिन् । उठ्नासाथ उम्लिएर सेलाउँदै गरेको मनतातो पानी पिउँछिन् । पानी भने सकभर बेलुका नै तताएर राख्छिन् ।
बेलुका तताएको पानी सकिएको भए उठ्नेबित्तिकै तताउँछिन् । मज्जासँग, समय नै लगाएर झन्डै डेढ लिटर पानी पिउँछिन् । ‘उठ्ने बित्तिकै अरु केही काम नगरी पानी पिउन थाल्छु,’ दैनिकीको सुरुआत सुनाउँदै उनले भनिन्– ‘पानी पिउन नै मलाई लगभग एक घन्टाजति लाग्छ ।’ पानी दिनभरिजस्तै नियमित पिइरहन्छिन्, प्रशस्त पिउँछिन् ।
त्यसपछि कोठामै गीत–सङ्गीत बजाएर मुड र शरीर फ्रेस तथा स्वस्थ बनाउनका लागि योगा र डान्स गर्छिन् । प्रायः यस्ता व्यायाम गर्ने उनी मुड नचलेका बेला भने गर्दिनन् । खाना खानुअघि मोबाइल चलाउँछिन् र केही घरायसी काम गर्छिन् ।
खाना श्रीमान्–श्रीमती दुवैले बनाउँछन्; कसले बनाउने भनेर बाटो हेर्दैनन् । ‘खाना बनाउने कुरामा तैंले वा मैले बनाउनुपर्छ भन्ने छैन,’ लक्ष्मी भन्छिन्– ‘जो अगाडि किचनमा छिर्छ, उसैले बनाइ’रा हुन्छ ।’ कसैले कसैलाई ‘आज तिमी बनाऊ पनि भन्नु पर्दैन, आफैं बुझेर बनाउन थाल्छन् ।
कस्तो खाना मन पर्छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले हाँस्दै भनिन्– ‘दाल–भात, तरकारी र अचार नै खाइन्छ ।’ ब्राउन राइसको खिचडी खान उनी खुब मन पराउँछिन् । चामल, दाल, तरकारी एकै पटकमा पाक्ने हुँदा छिटो र मिठो हुने भएकाले आफूले बिहान खिचडी समेत खानेगरेको उनले सुनाइन् ।
लक्ष्मी शाकाहारी रहिछन् । आफूले मासु नखाए पनि श्रीमान्का लागि भने पकाइदिन्छिन् । आफूले पकाएको खसीको मासु श्रीमान् जीवनलाई निकै स्वादिलो लाग्ने सुनाउँदै लक्ष्मीले भनिन्– ‘मैले पकाएको मासु मिठो हुन्छ रे ।’ १२ वर्षको उमेरसम्म मासु खाएको भए पनि छाडेको १५ वर्ष भैसकेकाले अहिले त मासुको स्वाद नै बिर्सिइसकिछन् ।
खानपानपछि लक्ष्मी र जीवन सँगसँगैजसो दैनिक काममा निस्कन्छन् । दुवै जना बिहानै निस्कनु परेका दिन भने बाहिरै खानपान हुन्छ । सामान्यतः काममा निस्कने उनको समय हो– बिहानको ११ बजे । उनीहरूको बिहान निस्कने समय कामअनुसार निर्धारित हुन्छ ।
ब्यागमै वालनट र आल्मन्ड, भोक लाग्यो कि ब्यागको खाजा
उनी प्रायः ब्यागमा खाजा बोकेरै निस्कन्छिन् । दिउँसो तीन बजेतिर खाजा खाने समय हुन्छ । ब्यागतिर देखाउँदै लक्ष्मीले भनिन्– ‘अहिल्यै ब्याग हेर्नुभयो भने पनि वालनट र आल्मन्ड छन्, जतिबेर भोक लाग्छ– निकाल्छु, खाइहाल्छु ।’
दिउँसो बाहिर खाजा खाइहाल्नुपरे मसरुमको सुप खान्छिन्; ब्ल्याक कफी पिउँछिन् । प्रायः घरमै खाना खाइने उनले बताइन् । ‘सुटिङ नै भएका बेला अर्कै कुरा हो नत्र मचाहिँ सकभर बाहिर खाना खान्नँ’– उनले भनिन् । बरु पानी पिएर पेट भर्ने तर सुपजस्ता केही सामग्रीबाहेक सकभर होटलमा खाने नगरेको लक्ष्मीले सुनाइन् ।
पिरो नखाँदा छटपटी
अभिनय गर्दा पात्रको चरित्र (क्यारेक्टर) अनुसार पनि आफूले चाहेको तौल मेन्टेन गर्न (घटाउन तथा बढाउन) उनी सामान्य किसिमका व्यायाम गर्छिन् । मोटो पात्रको चरित्र निभाउनु परेको अवस्थामा उनी खानपानमा नियन्त्रण गर्दिनन् । चाउचाउलगायतका जङ्कफुड पनि खान्छिन् । मोटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रोटिन तथा भिटामिनयुक्त खानपान गर्छिन् ।
‘मोटाउनुपर्दा चाउमिन–चाउचाउजस्ता खानपान मज्जाले गरिन्छ’– लक्ष्मीले सुनाइन् । पहिले चाउचाउ खाए पनि पाँच महिना अघिदेखि भने खानपानमा निकै सचेत हुन थालेको उनले सुनाइन् । कहिलेकहीं पिरो स्वादका कोरियन नूडल्स भने खान्छिन् । तर, अहिले भने यो पनि कमै खान्छिन् । ‘पिरो खान पाइनँ भने छट्पटिइहाल्छु,’ आफूलाई पिरो मन पर्ने बताउँदै उनले भनिन्– ‘डल्ले खुर्सानी घरमै हुन्छ, खाइ’रा हुन्छु ।’
बेलुकीको ‘लाइट’ खानपान
सामान्यतः साँझ सात बजेसम्म लक्ष्मी–जीवन दुवैजना घर पुगिसक्छन् । घर फर्कंदा सधैंजसो साँझ नै पर्छ । आजकल उनी बेलुकी खासै खाना खान्नन् । लक्ष्मीले सुनाइन्– ‘पहिले बेलुकी रेगुलर खाना बनाइन्थ्यो तर आजभोलि प्रायः लाइट किसिमका खानपान गरिन्छ ।’
बेलुका खानाका रूपमा भेज ब्वाइल सुप खान्छिन् । बेलुका खाना खायो भने असहज भएर निदाउनै नसक्ने उनले बताउँदै उनले भनिन्– ‘अहिले उहाँ (जीवन) पनि खासै खाना खानुहुन्न ।’ बेलुका खाना खानैपर्‍याे भने जीवनले नै पकाउँदा रहेछन् ।
खानपानपछि सुत्नुअघि एकछिन् लक्ष्मी र जीवन गफगाफ गर्र्छन्; सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन्; दिनभरिका कामको समीक्षा गर्छन्; दिनभर आएका म्यासेजको ‘रेस्पोन्स’ गर्छन् । लक्ष्मीलाई बोलिरहनुपर्छ । मन परेको व्यक्तिसँग कुरा गर्न पाउँदा मानसिकरूपमा फ्रेस हुने बताउँदै उनले भनिन्– ‘कुरा गर्न पाएँ भने फ्रेस भैहाल्छु, आफ्ना कुरा भन्न पाउँदा खुसी हुन्छु ।’ कुरा उकुसमुकुस पार्दै गुम्स्याएर राखे त्यो दिनको दैनिकी बिग्रने उनको भनाइ छ ।
सबैभन्दा नजिकका ‘बेस्ट फ्रेण्ड’ भनेकै जीवन भएकाले उनलाई आफ्ना कुरा भन्दा मन नै हल्का हुने उनी बताउँछिन् । आफू चाँडै घर पुगेका बेला भने फिल्म हेर्छिन् । सुत्दा रातको बाह्र बजिसक्ने उनले सुनाइन् ।
लक्ष्मी अग्र्यानिक तथा हाइजेनिक खानपानमा असाध्यै ध्यान दिन्छिन् । सुटिङ तथा अन्य कुनै कामले उपत्यकाबाहिर पुगेका बेला स्थानीय खानपानमा नै उनको ध्यान जान्छ । काठमाडौं फर्कंदा गाउँघरमा उत्पादन भएका अग्र्यानिक तरकारी तथा फलफूल बोकेर समेत ल्याउँछिन् ।
अभिनेतृ लक्ष्मीलाई फलफूलमध्ये ‘एभोकाडो’ असाध्यै मन पर्छ । ‘स्वाद र स्वास्थ्य दुवै हिसाबले एभोकाडो एकदमै मन पर्छ,’ स्वाद सम्झँदै उनले भनिन्– ‘कस्तो मिठो लाग्छ !’
रुघासम्म पनि लागेको छैन
उनी बेलाबखत स्वास्थ्य जाँच गराउँछिन् । सामान्यतः वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराए तापनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको अवस्थामा भने तत्काल जाँच गराइहाल्छिन् । कपाल झरेको अवस्थामा समेत थाइराइड पो भयो कि भन्ने शङ्का मेटाउन स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्छिन् । उनले भनिन्– ‘नर्मल्ली थाइराइड र कोलेस्ट्रोल चेक गराइ’रा हुन्छु ।’
रमाइलो पक्ष, अहिलेसम्म औषधि नै खानेगरी आफूलाई रुखा–खोकीसम्म लागेको पनि सम्झना नभएको उनले बताइन् । ठट्यौली शैलीमा हाँस्दै भनिन्– ‘साँच्चै भन्नुपर्दा म अलि हेल्दी नै मान्छे हो क्या !’
आफैं बनाउँछिन् कस्मेटिक्स : साथीहरू भन्छन् ‘डाक्टर’
आफूले प्रयोग गर्ने कस्मेटिक्स सामग्रीमा लक्ष्मी अत्यन्तै सचेत हुन्छिन् । बाहिर हिँड्दा धेरै मेकअप नगरी सनब्लक र मोइस्चराइजर मात्र लगाउने उनले सुनाइन् । अनुहारको सुन्दरताका लागि उनी प्राकृतिक किसिमका, जडीबुटी तथा वनस्पतिका कस्मेटिक्स सामग्री आफैं बनाएर समेत लगाउँछिन् ।
‘गाउँबाट बेसार, मह ल्याएर आफैं फेसप्याक तयार पार्छु,’ उनले भनिन्– ‘अनुहारमा लगाउने क्रिमहरू आफैं बनाउने भएकाले साथीहरूले मेरो नाम नै ‘डाक्टर’ पो राखिदिएका छन् ।’ प्याकेजिङका वस्तुमा त्यति विश्वास नगर्ने भएकाले चनाको पिठो, कफीलगायतबाट आफैंले फेस प्याक तयार पार्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
स्याम्पु, फेसवास आदि प्रयोग गर्दा पनि निकै सचेत भएर मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सुटिङमा जाँदा पनि यो मामलामा उनी निकै सचेत हुन्छिन् ।
छतबाट खसेर बाँचिन् र त अहिले जमिन्
दस वर्षअघि लक्ष्मीको जीवनमा एउटा अविस्मरणीय घटना घट्यो । धन्न उनको ज्यान बच्यो । एसएलसीको परीक्षा सकेर बसेकी थिइन्, नतिजा आएकै थिएन । राजधानीकै गौरीघाटस्थित घरको तीन तला माथिको छतमा सिरक सुकाउन गएकी थिइन् । छतको छेउमा गएर सिरक झड्कार्दै टक्टक्याउँदा एक्कासि सिरकले तानेछ । सिरकसँगसँगै छतबाट सडकमा खसिन् ।
‘तीन तला माथिबाट खसेर रोडमा पछारिएछु,’ लामो सास फेर्दै, रोकिएर हाँस्दै लक्ष्मीले भनिन्– ‘त्यतिबेला बाँचेकै हो, मेरो खुट्टा पनि भाँचिएन; निखिल उप्रेती हामफालेजस्तो म त छतबाट झरेर रोडमा ठिङ्ग उभिएको क्या !’
सडकमा झर्दा उनी बेहोस् भैसकेकी थिइन् । परिवार र छिमेकका मान्छेले देखिहाले । हतार–हतार अस्पताल पु¥याइयो । छतमा सिरक सुकाउँदै गरेकी उनी केही घन्टापछि होसमा आउँदा त अस्पतालको बेडमा पो सुतिरहेकी । ‘आँखा खोल्दा त सिनेमाजस्तै लाग्यो, मरेपछि फेरि ‘स्वर्ग’ मा झरेजस्तो फिल भयो,’ अस्पतालको त्यो क्षण सम्झँदै प्रफुल्लित मुद्रामा उनले सुनाइन्– ‘अस्पताल लगेको पाँच घन्टापछि मात्र ब्युँझिएछु ।’
तीन तलाको छतबाट खस्दा पनि मेरुदण्डमा सामान्य समस्या बाहेक कुनै शारीरिक तथा मानसिक क्षति भएनछ । छतबाट खस्दा पनि बाँचेको त्यो क्षणलाई सम्झँदै उनी भन्छिन्– ‘म त ‘लक्की’ रहिछु नत्र त्यतिबेलै मर्थेंहोला; त्यत्रो अग्लो ठाउँबाट खस्दा पनि मलाई केही नभएको देख्दा डाक्टर नै चकित भए ।’ छतबाट खसेर पनि बाँचेर कलाकारितामा जम्न पाइएकामा उनी गौरवान्वित छिन् ।
केही समय अघिसम्म बेला–बेला ढाड दुख्ने समस्या भए पनि अहिले कुनै समस्या नरहेको उनले सुनाइन् । अस्पतालै भर्ना हुनुपरेको उनको तीतो अनुभव त्यही मात्र हो । त्यसरी लडेर उपचार गर्दा बाहेक जीवनमा आफूले औषधि नै नखाएको उनले दोहोर्‍याइन् ।
चलचित्र–नाटक–चलचित्र : अभिनय यात्रा
फिल्म यात्राबाट नाटकमा प्रवेश गरेकी अभिनेतृ बर्देवाले दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । नाटकमा प्रवेश गर्नु अगाडि नै उनले फिल्मी यात्रा सुरु गरिसकेकी थिइन् । कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा आमासँग ‘सुन्दर मेरो नाम’ फिल्ममा ‘पासिङ सिन’ गरेर उनी अभिनय –यात्रामा लागेकी हुन् । त्यो फिल्ममा लक्ष्मी आफ्नै आमासँग देखिएकी थिइन् ।
‘त्यो बेला फिल्म खेल्छु भन्ने लागेको थिएन, नाटकमा नै लाग्छु भन्ने थियो; एक्टिङका लागि त मैले धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने थियो,’ उनी सम्झन्छिन्– ‘त्यसैले नाटक सिकाउने एक्टिङ स्टुडियोमा फोन गरें तर त्यहाँ अभिनयको कक्षा सुरु भएकै रहेनछ ।’ लक्ष्मीले थपिन्– ‘एक जना आशान्त शर्मा भन्ने हुनुहुन्थो, उहाँले खासै रेस्पोन्स गर्नुभएन तर आफूलाई भने नाटक सिक्ने कक्षामा ज्वाइन गर्ने मन मरेकै थिएन ।’
लक्ष्मीमा ‘नाटकको भोक’ जागी नै रह्यो । फेरि सोही स्टुडियोका विक्रम परियार भन्ने व्यक्तिलाई फोन गरिन् । ‘नाटकमा लिने मनसाय छैन’ भनेर उनले पनि फोन राखिदिए । तैपनि लक्ष्मीको मनमा नाटक सिक्ने चाहना जागी नै रह्यो । आशान्त शर्मालाई फेरि फोन गरिन् । लक्ष्मीले किचकिच् गरिरहेपछि आशान्तले स्टुडियोमा बढारकुँढार गर्ने काम गर्न भने । उनले त्यही काम गर्न थालिन् । त्यसरी काम गर्दै जाँदा एक दिन एउटा नाटकका लागि महिला पात्र आवश्यक पर्‍याे । त्यही मौकामा उनले नाटकमा प्रवेश गरिन् । त्यही नाटकमा राम्रो अभिनय गरेका कारण उनले अरु नाटकमा काम गर्न पाइन् ।
फिल्मी यात्रा : के–के आए, कुन्–कुन आउँदै ?
‘माला’, ‘घामपानी’, ‘जालो’, ‘बुलबुल’, ‘सेल्फी किङ’ लगायतका दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनेतृको भूमिकामा देखा परिसकेकी बर्देवालाई ‘बुलबुल’ फिल्मले नै चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइदियो ।
पहिले ‘बुलबुल’ मा अभिनयका लागि लक्ष्मीलाई अफर आएको थिएन । उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘हरि’ को प्रिमियर हेर्न पुगेका ‘बुलबुल’ का निर्माता रामराजा दाहालको नोटिसमा परिन् । लक्ष्मीले ‘हरि’ मा गरेको अभिनय मन परेपछि आफ्नो फिल्म उनैलाई खेलाउने सोच रामराजाले बनाएछन् ।
प्रिमियर हेर्ने क्रममा हलमा रामराजा–लक्ष्मीबीच देखादेख मात्र भएको थियो, बोलचाल भएको थिएन । ‘केही दिनपछि रामराजाले मलाई फोन गर्नुभयो र बानेश्वरमा भेट्ने कुरा भयो,’ लक्ष्मी भन्छिन्– ‘निर्माता राजारामदाइ र निर्देशक विनोददाइसँग भेट भयो; विनोददाइले फिल्मको स्टोरी सुनाउनुभयो, मलाई मन पर्‍याे ।’
‘दाइले खोजेको पर्फेक्ट क्यारेक्टर ममा देख्नुभएको रहेछ, त्यसैले हामीले हतार–हतारमै एग्रिमेन्ट गर्‍याैं’– लक्ष्मी भन्छिन् । १४ वटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी लक्ष्मीलाई ‘बुलबुल’ फिल्मको क्यारेक्टर नै मन परेको बताउँदै भनिन्– ‘म नोटिस भएको फिल्म पनि यही ‘बुलबुल’ हो; ‘बुलबुल’ मा आफूले गरेको अभिनय नै मलाई मन परेको हो ।’
त्यसैगरी, ‘हरि’ फिल्मको क्यारेक्टर पनि उनलाई मन परेको थियो । उनी अभिनित ‘नीरफूल’, ‘प्रेमगीत– ३’ र ‘धुलो’ प्रदर्शनको तयारीमा छन् । उनी अभिनीत केही म्युजिक भिडिओ पनि सार्वजनिक हुने तयारीमा छन् ।
आफूलाई यही क्यारेक्टरमा खेल्छु भन्ने नलागेको बताउँदै उनी भन्छिन्– ‘मलाई यही क्यारेक्टर चाहिन्छ भन्ने छैन, जुनसुकै क्यारेक्टर दिए पनि त्यसैमा राम्ररी भूमिका निभाउनेतर्फ लाग्छु ।’ यही र यस्तै क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त उनलाई पनि लाग्छ तर त्यो गर्न नसक्दा नमज्जा महसुस हुन्छ । ‘जति गर्ने हो, बेस्ट गर्ने हो,’ उनी भन्छिन्– ‘यही गर्छु, यस्तो–उस्तो गर्छु भन्ने बानी ममा छैन ।’ आफूलाई ‘हिरोइन’ भन्दा पनि ‘कलाकार’ भनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने सुनाउँदै उनी भन्छिन्– ‘कलाकार भनिदिँदा आनन्द लाग्छ ।’
आफूले अभिनेता विपिन कार्कीसँग धेरै कुरा सिक्न पाएको ‘सेल्फी किङ’ को प्रचारका बेला लक्ष्मीले बताएकी थिइन । यस फिल्ममा लक्ष्मीलाई विपिनकी श्रीमतीको भूमिकामा देख्न पाइन्छ । उनले यस अगाडि ‘हरि’ मा पनि विपिनसँग काम गरेकी थिइन् ।‘सेल्फी किङ’ मा उनी र विपिनको जोडीलाई दर्शकले रुचाएका थिए ।
लक्ष्मीले यो फिल्मबाट धेरै अपेक्षा गरेकी थिइन् तर सोचेअनुसार सफलता पाइनन् । सो फिल्ममा आफ्नो अभिनयप्रति निकै सन्तुष्ट रहेको उनले बताएकी थिइन् । ‘सेल्फी किङ अरु फिल्मभन्दा फरक कथामा बनेका कारण पनि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै थियो,’ लक्ष्मी भन्छिन्– ‘तर फिल्मले धेरै आर्थिक सफलता नदिलाए पनि मेरो अभिनयको चर्चा भने कम भएन ।’ लक्ष्मीले यसअघि ‘चङ्गा’ बाट पनि निकै तारिफ पाएकी थिइन् ।
फिल्ममा मात्र होइन, लक्ष्मीले थुप्रै म्युजिक भिडिओमा पनि काम गरिसकेकी छन् । केही अघि उनको ‘गलबन्दी’ नामक म्युजिक भिडिओ बजारमा आइसकेको छ । यो भिडियोको निर्देशन लक्ष्मीकै श्रीमान् जीवन भट्टराईले गरेका हुन् ।
नाटककै सिलसिलामा प्रेम अनि विवाह
लक्ष्मी–जीवनको जोडी लामो समयदेखिको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत भएको हो । ‘एउटा रेडियो नाटकमा काम गर्दा हामीबीच भेट भएको थियो,’ आफूहरुको प्रेम सम्बन्धबारे खोल्दै लक्ष्मीले भनिन्– ‘रेडियो नाटकमा सँगै काम गरियो, पछि थियटरमा आएपछि मात्र हामी प्रेममा परेका हौं ।’
नाटकमा अभिनयकै क्रममा मण्डला थियटरबाटै आफूहरूबीचको प्रेम अङ्कुराएको लक्ष्मीले सुनाइन् ।